Ndepụta nke ndị na-enye SaaS na mmefu ego azụmaahịa ha | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 3, 2015 Wednesday, September 2, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na m zute onye sitere na Vital, aga m amakụ ya maka ihe omuma a. Anyị na-adịbeghị anya na-akọrọ a post na ziri ezi ahia mmefu ego dị ka ọ na-ezo aka a pasent nke mkpokọta revenue, ma nke a na-enye ụfọdụ mmefu ego dị omimi nke na-akwado ma na-ewusi ozi infographic ọzọ ahụ.
A afọ ole na ole gara aga, anyị na-arụ ọrụ na a Software dị ka a na-eweta ọrụ na Marketing akpaaka ụlọ ọrụ na-emefu ihe na-erughị a isii ọbula mkpokọta kwa afọ mmefu ego na anyị aka inyere ụgbọala ha ahịa òkè.
Anyị nwere ezigbo ọganiihu na ha, na-eto eto nleta, mbak, na ahịa ruru eru na-eduga ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ kwa afọ. Ntinye ego anaghị agbanwe agbanwe, mana ọchọrọ ka ọ na-abawanye ruo mgbe anyị na-eme infographics, vidiyo na-akọwapụta na ọbụna wuru ọtụtụ saịtị maka ha. Ha na-agagharị site na ndị ọrụ, onye nke ọ bụla chọrọ ịgbanwe ụzọ, yabụ na-emetụta ike.
Ka o sina dị, ọ na-atọkarị ụtọ ịhụ ọdịnaya anyị mepụtara maka ha na-ewere ihu igwe na saịtị ụlọ ọrụ na-amata na ụlọ ọrụ ahụ na-emefu ntakịrị ihe ndị nnukwu egwuregwu nọ na ụlọ ọrụ ahụ. Anyị bụ ndị na mpako nke ihe anyị nwere ike ịmegharị agịga na obere akụrụngwa. Ọ bụ ikekwe ike anyị kacha dị egwu.
Otu ụbọchị, o mere.
Hey, anyị na gị na-eji ọtụtụ tọn ego anyị na-enweta na-agbasị anyị butts site _________.
Nke ahụ dị ka m na-eche ihe kpatara Mike Tyson ji nwee ike ịkụ m aka na nke mbụ.
The tọn ego kwa mmefu ego ha erughị $ 0.005 kwa $ 1 ọ bụla na azụmaahịa ụlọ ọrụ ha zoro aka na infographic a na-emefu. Enwere m oge ịkpọ ụlọ ọrụ ha onye asọmpi, mana ha mere ya. Onye ha na asọmpi nwere ihe omume mpaghara na nke mba, mkpọsa ọchụchọ akwụ ụgwọ, ọbá akwụkwọ nke ọdịnaya dị elu, ọwa nke vidiyo n'ofe isiokwu niile, yana nnukwu mgbasa ozi na-emefu na saịtị niile. Mbanụ m tụbara; anyị mechiri nkwekọrịta ahụ ma pụọ.
Ebe ọ bụ na anyị na-ejere ma ndị ọrụ SaaS ọrụ zuru oke na obere mmalite, ọ mara mma ile anya ebe mkpofu dị, ebe mmetụta ya dị, na ihe mmefu ego bụ. Ọ bụ ezie na ozi infographic a jikọtara ahịa na ire ahịa niile, ọ kwesịrị ịkpụzi etu esi etinye ego na nnukwu azụmaahịa na ahịa bụ maka ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa azụmaahịa.
Na-emefu ego buru ibu karịa ego gị na-enweta ma o doro anya na ị ga-erite uru na ụba nke uto. Gaghị eri ego, mana ị ga-egwu ala.
Tags: american ọha na eze akwụkwọ mmefu egoapụl ahịa mmefu egoteknụzụ nke teknụzụ azụmaahịamgbe niile si na-ere ahịa si egogoogle ahia egonnukwu ụlọ ahịa mahadum mahadum Canyonidexx laboratories marketing budgetIntel ahịa egonjikọ mmefu egoManhattan na-akpakọrịta mmefu egomarin software marketing mmefu egoahia mmefu egoahịao ahia mmefu egomicrosoft ahịa mmefu egoego ahia ahiarackspace ahịa mmefu egosalesforce ahia mmefu egotableau ahia mmefu egoiwe iwe ahia ahia ahiatwitters ahia ego
BigCommerce na-ebupụta Platform Ecommerce Platform
Sep 4, 2015 na 10: 37 AM
M ga-amakụ Vital oke… na ekele maka ịkekọrịta Doug. Obi ike na ha ga-eme nwelite 2015. Ekwesịrị m ikwenye na mmefu nke LinkedIn amụbawo nke ukwuu dabere na nchọpụta onwe onye ma ọ ga-amasị m ịhụ ụfọdụ mgbakwunye na ngalaba ahịa dị ka ahịa ọdịnaya na vidiyo.
Sep 26, 2015 na 11: 56 AM
Ezigbo nyocha. Dịka onye na-eweta SaaS na-eto eto, a ga-ebipụta Infographic a ma debe ya na mgbidi iji hụ kwa ụbọchị. 🙂
Ọkt 13, 2015 na 4:33 PM
Edemede mara mma nke nwere ihe omuma bara oke uru.
Feb 20, 2017 n’elekere 5:35 nke abali
Amamihe! Ọ dịkwa mma ịnweta ka infographic gosipụtara nke a ka ọ bụrụ na ndị mmadụ agaghị achọ ịgụ isiokwu nwere ọnụọgụ na ọnụọgụ n'okwu! N'ihe banyere nke ahụ, m nụrụ n'oge na-adịbeghị anya nnukwu ihe banyere Lirik (nke na-enye ọrụ SaaS maka Salesforce na NetSuite).